Izimbali ezinamajikijolo e-orange, futhi ngempela ngezithelo ezikhanyayo zanoma imuphi umbala, zibukeka zithakazelisa futhi zinhle. Zingaba yinto ehle kakhulu yokuhlobisa, imininingwane ephawulekayo, futhi-ke, kuyathakazelisa ukuyikhula.
Ngokuvamile, noma yikuphi izitshalo zezithelo ezithakazelisayo ukuhlala ekhaya, nembali enezimbali ze-orange futhi isungulwe ukuze kube neminye imizwa yokugcoba, futhi omunye uhlanganisa ngisho noKhisimusi. Ngakho-ke yiziphi izinketho nokuthi kulula kangakanani noma kunzima kangakanani ukuzuza nokukhula okufanayo ekhaya?
Mhlawumbe, isitshalo esithandwa kakhulu futhi esifanele kunazo zonke abalimi bezimbali zesigaba esithi "Izimbali zasekhaya ezinamajikijolo ane-orange-tinted" yi-nerd. Kubonakala kuhlakaniphile kakhulu, futhi kulula kakhulu ukuthola ekuthengisweni. Kuthathwa njengokungathobeki kahle, kudinga ukutshala ezindaweni ezimnandi kakhulu. Kungcono ukukhetha i-sill window, eqondiswe empumalanga noma entshonalanga. Uma izinga lokushisa lidlula amadigri angu-15, isihlahla kumele sihlungwe, ngaphandle kwalokho akudingeki neze. I-nertera iyigubhu lamaqabunga amancane ahlaza. Ngentwasahlobo, iyakhukhula, kodwa ayithandwanga ngezimbali ezijwayelekile, kodwa izithelo ezinhle ze-orange ezitholakala ekupheleni kwehlobo futhi zingahlala phakathi nobusika. Uma i-fruiting ingafiki noma ingenalutho ngokwanele, kungenzeka ukuthi lesi sitshalo sisezindaweni ezifudumele kakhulu. Lelimbali likhula ngamajikijolo e-orange ngokushesha. Inhle kakhulu ibukeka kahle ifomu eliyinkimbinkimbi ngezithelo eziningi.
Esinye isitshalo esithandwayo esinezithelo ezibomvu-orange ziwu-muraya. Kuyinto evamile emaflaya aseRussia, ngokuvamile akuyona inkinga yokuyithenga noma. Isici esithakazelisayo sale mbali ukuthi singasizungezwe izimbali nezithelo zezinga elivuthiwe lokuvuthwa, ngoba i-muraia iyisimenywa ezivela ezindaweni ezishisayo. Kodwa-ke, ayifani ngokumangalisayo. Kudinga ukuhlakazeka, kodwa ukukhanya okwanele okwanele. Ukushisa kwekamelo kufanelana kahle naye, kodwa ebusika kungcono ukumyisa endaweni epholile. Ehlobo, le mbali enamajikijolo e-orange idinga ukuchelela njalo nokuningi, kodwa ngaphandle kokunyuka kwamanzi, ikakhulukazi izitshalo ezindala. Ngokuthuthukiswa okwanele kwempande Uhlelo lukhula ngokushesha kakhulu. Izimbali ze-muraia iphunga le-jasmine, kodwa ngokuvamile aziqhakazi isikhathi eside.
Ekugcineni, enye imbali enezimbali ze-orange yi-Physalis edumile. Yiqiniso, kungcono ukuyikhulela ngaphandle, kodwa ungayilinga ekhaya noma ebhalini. Le minyaka ngesikhatsi se-fruiting ihlobisa kakhulu - amajikijolo ayo ahlanganiswe ne-cheholchik encane, ekhumbuza i-lantern paper lantern. Ama-berries angama-physalis angadliwa, ajwayele ukusetshenziselwa ukupheka, ikakhulukazi ezitsheni ezimnandi. Lesi sitshalo sisinda ngokugcwele e-penumbra, sinenkinga enkulu kakhulu. Kodwa ungawuthululi. Ngo-Agasti, ukunisela ukuyeka nhlobo. Ngalesi sikhathi, qala ukubopha izithelo, ozopheka kamuva ukuphuza.
Imbali ngayinye echazwe kulesi sihloko ngamajikijolo e-orange uyohlobisa indlu futhi inikeze noma yikuphi indawo yokuzijabulisa. Ngakho ungesabi ukuzama.
I-Apricot "intandokazi": incazelo yezinhlobonhlobo, izici zokunakekela, ukukhiqiza, ukubuyekezwa. I-apricot yesifunda saseMoscow
A emfushane ukuhlaziywa etemibhalo: "weJubili" (Mayakovsky). Izici izinkondlo lombhali
Car brand "Mitsubishi" - Tuning L200
Ungavimbela kanjani ukukhangisa ku-"Opera"? Ungavimbela kanjani izikhangiso ze-pop-up: uhlelo
Sergey Sarkisov: Biography, izithombe
Indlela yokukhetha ingane yokuthuthukisa
Siyini "Bro": umngane, isitha, noma nje ilungelo?
Izinzuzo garlic phezulu, njengokungathi ebabayo kungase